Sefarada - Howling Pixel
Ny mpahay tantara sasany dia manamarika fa ny razamben'ny Bene Israely dia isan'ny iray amin'ireo foko verin'i Israely . Ny manampahefana jiosy anefa tsy manaiky ny Bene Israely ho iray ami'ireo foko very. Tamin'ny taona 1964 dia nanambara ny fikambanan'ny raby ao Israely fa Jiosy tanteraka ny Bene Israely .
Ny Beta Israely dia vahoakan'i Etiopia izay antsoina hoe Falasha koa tany aloha. Atao hoe Jiosy etiopiana izy ireo ao Israely. Ny Beta Israely sasany, sy ny manampahaizana jiosy maro, dia mihevitra fa taranaky ny fokon'i Dana izy ireo, tsy araka ny tantara nifandovana izay milaza azy ireo fa taranaky ny mpanjakavavin'i Saba (na Seba) . Ny fomban'ny Beta Israely dia mifandray amin'i Jerosalema hatramin'izay.
Ny Bney Menase dia vahoaka aziatika any amin'ireo fanjakana any amin'ny tapany avaratra atsinanan'i India, any amin'ny sisin-tany birmana, dia i Manipur sy i Mizoram, izay fantatra amin'izao fa manam-piaviana jiosy. Hatramin'ny taonjato faha-20 ka hatramin'izao dia ny vondrona atao hoe Chin sy Kuki ary Mizo ao amin'io faritra io no milaza ny tenany fa taranaky ny iray amin'ireo foko folo verin'i Israely ka nadray ny jodaisma ho fivavahany. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-20 ny raby Eliyahu Avichail, ao amin'ny vondrona Amishav, dia nanome anarana ireo olona ireo hoe Bnei Menashe ("zanak'i Manase"), araka ny fitantaran'izy ireo ny maha taranak'i Manase azy. Ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ireo fanjakana roa resahina eo ambony ireo, izay miisa maherin'ny 3 700 000 sady manana ny fomba amam-panao azy ireo tsirairay, dia tsy manao ny tenan'izy ireo ho taranaka israelita.
Ny ankamaroan'ny Bney Menase dia nanaraka ny fivavanana kristiana. Nefa tamin'ny taona 1951 dia nilaza ny iray amin'ny mpitarika azy fa nahita tamin'ny nofy ny maha tanindrazan'ny vahoanany an'i Israely. Efa hatramin'ny taona 1950 izy ireo no nanambara fa taranaky ny fokon'i Manase izay nitady fialofana tany amin'ny faritra faran'izay lavitra any Azia. Hatramin'ny faran'ny taonjato faha-20 no mankaty dia misy ny nandray ilay hevitra manao azy ireo ho Jiosy, nefa mitohy ny finoan'izy ireo ny maha Mesia an'i Jesoa (Jodaisma mesianika). Nanomboka tamin'ny taona 1970 ny Bney Menase dia nianatra sy niaina ny jodaisma noho izy ireo maniry ny hiverina amin'izay inoany fa fivavahan-drazany. Araka ny Shavei Israel (fikambanana israeliana mitady ireo foko folo very) dia miisa 10 000 eo ho eo ny Bney Israely.
Tamin'ny Marsa 2005, rehefa avy nanadihady ny raby lehibe sefarada ao Israely (Rabbi Shlomo Amar) dia resy lahatra ny amin'ny maha taranak'i Israely ny Bney Menase, ka nanaiky ny fitakian'izy ireo ny maha taranaka jiosy.
Ny 1000 amin'izy ireo dia monina ao Israely amin'izao fotoana izao, sady efa niova finoana ho amin'ny jodaisma. Ny 7000 hafa dia mbola monina any Mizoram (fanjakana any India avaratra atsinanana) miandry ny fiovam-pinoany ho amin'ny jodaisma ofisialy.
Ny fiteny ladino na fiteny jodeo-espaniola dia fiteny avy amin'ny fifangaroan'ny fiteny kastilàna tranainy (ny fiteny espaniola) sy ny fiteny hebreo. Maro ny Jiosy sefarada taranak'ireo Jiosy voaroaka avy any Espaina tamin'ny taona 1492 izay miteny ladino ao amin'ny faritra midadasika amin'ny tany lemaka manodididina ny Ranomasina Mediteranea. Ny fiteny jodeo-espaniola dia tsy tokony hafangaro amin'ny fiteny jodeo-katalàna mifanakaiky aminy, ary ny hoe fiteny ladino dia tsy tokony hafangaro amin'ny fiteny ladîna, izay fiteny reto-romana tenenin'ny olona ao amin'ny Dolomita italiana.
Misy dimy ireo boky atao hoe חמש מגילות / Hamesh Megillot, ao amin'ny Baiboly hebreo, ao amin'ny sokajy Ketuvim ("Soratra"), izay midika hoe "horonam-boky dimy", dia ireto avy :
Sefer Shir Hashirim (ספר שִׁיר הַשִּׁירִים) (Tononkira Fanaperana)Sefer Ruth (ספר רות) na Megillat Ruth (מגילת רות) (Rota)Sefer Eikhah (ספר אֵיכָה) (Fitomaniana)Sefer Qoheleth (ספר קֹהֶלֶת) (Mpitoriteny)Sefer Ester (ספר אסתר) na Megillat Ester (מגילת אסתר) (Estera)Ny Bokin'i Estera no malaza indrindra amin'izy dimy ka atao hoe Ha Megila fotsiny.